Baarlamanka Puntland oo sheegay in ay dowladda ku dabageli doonaan wax ka qabashada kufsi iyo dil ka dhacay Gaalkacyo – Kalfadhi
Baarlamanka Puntland oo sheegay in ay dowladda ku dabageli doonaan wax ka qabashada kufsi iyo dil ka dhacay Gaalkacyo
Guddiga joogtada ah ee golaha wakiillada Puntland ayaa maanta si kulul u dhaleeceeyay falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee loo geystay Caa’isha Ilyaas oo maydkeeda shalay laga helay Gaalkacyo.
“sida ugu adag ayaan u cambaaraynaynaa falkan,” ayuu yiri Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiillada Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame
Goluhu waxay ka digeen in aan la marin habaabin booliska iyo hay’adaha kale ee baarista ku lugta leh oo aan lagu jihayn meelo kale iyo dad aan falka ku lug lahayn, iyadoo ujeedadu tahay in dhibanayaasha la qariyo.
Waxay uga digeen qabaa’ilka in aysan isku deyin in ay difaacaan falka noocaan ah.
Baarlamanku wuxuu ku baaqay in si weyn looga shaqeeyo kiiskan isla markaasna la qabto dadkii geystay, iyadoo ay tahay in sharciga la waafajiyo.
“In shareecadda islaamka la waafajiyo ayaan rabnaa, waxa illaahay u jideeyayna dadka noocaas ah in la mariyo,” ayuu yiri Xildhibaan Saadiq Abshir Garaad
Baarlamanka ayaa sheegay in ay si gaar ah isha ugu haynayaan baarista iyo sida ay dowladdu wax uga qabato kiiskan, waxayna sheegeen in ay kula xisaabtamayaan.
Xildhibaan Mahad Salaad “Gabar Saqiir ah inla kufsado, la dilo, waa wax islaamnimada iyo dhaqankeena suuban ka baxsan”
Xildhibaan Jaabiri oo ragga u jeediyay in ay abaabulaan kacdoono ay kaga soo horjeedaan falkii ka dhacay Gaalkacyo